Izibonelelo zeSNCB iinkonzo zikaloliwe ngaphakathi kweBelgium nakwiYurophu iphela. Ngetikiti elifanelekileyo, you can visit all the best iindawo zeholide eYurophu. Ngamacandelo ohlukeneyo amatikiti kunye nokubhaliswa kwekhadi, I-SNCB ibonelela ngeemfuno zomntu wonke.
Oololiwe bahlala rhoqo eBrussels – eGhent, Antwerp – wasebenzisa, Brussels – Namur. Unokufika nakumazwe angabamelwane aseYurophu usebenzisa oololiwe be-SNCB.
Ixabiso SNCB train tickets kuphakama njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ungazigcinela imali ngokubhukisha amatikiti etreyini e-SNCB kude kangangoko kunokwenzeka kusuku lokunduluka. Amatikiti etreyini e-SNCB ayekhona kwangoko 3 ukuba 6 kwiinyanga ezingaphambi kokuba ahambe ngololiwe. Ukubhukisha kwangethuba kuqinisekisa ukuba ufumana ezona ndleko zisebenzisayo zeSNCB. Banqunyelwe nenani, kwangoko uyalela, Ixabiso eliphantsi kuwe. Ukugcina imali kwiitikiti zikaloliwe zeSNCB, thenga amatikiti akho ASAP.
Oololiwe be-SNCB Bafunwa kakhulu, kwaye nokhuphiswano oluncinci, Okwangoku bahlala bezona zikhetho ziphambili koololiwe eBelgium. I-SNCB inokukwazi ukuseta izithintelo zetikiti likaloliwe njengaleyo ethintela ukutshintshwa kwetikiti okanye ukubuyiselwa imali ngaphandle kokuba luhlobo lweshishini lwetikiti. Nangona kusekho iwebhusayithi yeeforum apho ungathengisa khona amatikiti akho isandla sesibini ebantwini, I-SNCB ayikuvumeli ukuthengiswa kwetikiti lesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
Gcina uloliwe ngowona mkhulu, egqibelele, kunye nezona ndleko zixabiso eliphantsi kwitikiti laseYurophu. Ubudlelwane bethu nabaqhubi kaloliwe abaninzi, imithombo yamatikiti kaloliwe, kwaye ulwazi lwethu ubuchwephesha ubuchule ukunika Gcina A Isitimela ukufikelela kweyona lixabiso lixabisa itikiti uloliwe. Asiboneleli nje ngexabiso eliphantsi lokuthenga amatikiti e-SNCB kuphela; sibonelela ngokufanayo kwezinye iindlela ze-SNCB kwaye siyazingca ngenkonzo yabathengi ebalaseleyo kwimarike kaloliwe.
1) Fika kwiZiko leSixeko. Le yenye yeendlela eziluncedo zoololiwe be-SNCB xa kuthelekiswa neenqwelo moya. Oololiwe be-SNCB kunye Lonke olunye uhambo ngololiwe naphi na kwi isixeko embindini yesixeko esilandelayo. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, Brussels, Antwerp, wasebenzisa, okanye eLiege, Ukuma kwiziko lesixeko kuluncedo olukhulu koololiwe beSNCB!
4) Oololiwe banobuhlobo ngakumbi xa uthelekisa phakathi koololiwe kunye neenqwelo moya, oololiwe babephuma eqongeni. Iinqwelomoya iindiza ziwungcolisa umoya ubushushu bawo ngamanqanaba aphezulu ekhabhoni ayinikelayo. Oololiwe xa kuthelekiswa banika okuninzi ngaphantsi kongcoliseko lwekhabhoni kuneenqwelomoya.
Oololiwe be-SNCB bemka eGhent ukusuka kwi IGhent Saint Pieters station, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
Liege, Liege I-Guillemins sisikhululo sikaloliwe esiphakathi se-SNCB. ngoko ke, Isikhululo sikaloliwe iLiege sidibanisa iBelgium namazwe angabamelwane, making it one of the busiest train stations in Wallonia. Ngaphezu, ukuba uceba ukuya eJamani, Fransi , Laksembheg, okanye iNetherlands evela eBelgium, Kungcono ugcine amatikiti etreyini eSNCB kuselithuba.
wasebenzisa (Ibrugge – Igama lesixeko elifanayo kolunye ulwimi oludumileyo) Isikhululo sikaloliwe sesinye isikhululo sikaloliwe esixakekileyo saseSNB eFlanders. Umzekelo, Ukusuka eBruges, Unoku-odola itikiti lakho lololiwe ukuya kwelinye endaweni ethandwa eBelgium: eGhent, Antwerp, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is at a 20 imizuzu’ ukuhamba umgama ukusuka kwi- kumbindi wesixeko, kunye nesikwere esihle seSixeko esiDala saseMarkt.
wena unako gcina a ndiyazie ngaphambili on domestic I-SNCB oololiwe. wena ngeke get a personal isitulo emva kokwenza ugcino, kodwa oku akunyanzelekanga.
I-SNCF TGV Trenitalia